Wararka Maanta: Isniin, Dec 24, 2012-Kulan ay Xidhibaannada Baarlamaanka Soomaaliya ku yeesheen Xaruntooda Muqdisho oo kusoo dhamaaday Natiijo la'aan
Miisaaniyaddan oo cadadkeedu yahay $103.893,092 (In ka badan boqol iyo saddex milyan oo dollarka Mareykanka ah) ayay xildhibaanadu sheegeen inaan lagu caddeyn mushaaraadka ciidamada dowladda iyo kharashaadka ku baxaya xafiisyada madaxda dowladda.
Wasiirka maaliyadda, qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah, Maxamuud Xasan Sulyemaan ayaa su'aalo lagu weydiiyay kuanka maanta oo ay soo xaadireen 156 mudane oo ka mid ah 275 xildhibaan ee uu baarlamaanku ka kooban yahay.
Doodo badan kaddib ayaa wuxuu kulanku isku bedelay buuq iyo sawaxan, iyadoo ay xidhibaannada qaarkood ku qalinayeen erayo ay ku dalbanayaan in dib u habeyn lagu sameeyo miisaaniyadda ay xukuumaddu ku shaqeynayso sannadka 2013-ka.
Xildhibaannada qaarkood ayaa waxay dalbadeen in la yareeyo safaaradaha ay Soomaaliya ku leedahay dalalka calaamka, sidoo kalena waxay codsadeen in aad loo yareeyo kharashaadka ku baxa xafiisyada madaxda dowladda Soomaaliya, iyagoo ku taliyaya in kharashkasa loo adeegsado sugidda ammaanka.
Ugu dambeyn, waxaa kulanka soo xiray guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka Soomaaliya, Jeylaani Nuur Iikar oo sheegay in xidhibaannadu ay berrito isku soo laabtaan si looga doodo mar kale miisaaniyadda ay xukuumaddu ku shaqeynayso sannadka soo socda.
Kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay oo xildhibaannnada baarlamaanku ay yeeshaan oo buuq ku dhammaada, tan iyo sidii loosoo magacaabay baarlamaanka federaalka Soomaaliya bishii Ogoosto ee sannadkan.